Taizhou Yongyu Maindasitiri CO., LTD. yakavambwa muna 1994. Iyo kambani yakazvipira kune iyo aluminium auto zvikamu zvekugadzira kweanopfuura makumi maviri emakore. Ikozvino kambani ine nzvimbo yekuvaka yemakumi mana emamirimita emamirimita uye inoshandisa vanhu vanopfuura mazana matatu. Iyo ine yepamusoro-soro manejimendi timu uye vanopfuura makumi masere ehunyanzvi uye ehunyanzvi vashandi. Iyo kambani inyanzvi OE mutengesi iyo inotarisa pane kukweva giravhiti、yakaderera-kumanikidzwa kukanda uye kufa kukanda. Kubudirira、 Kudzinga uye kuburitsa kugona kwekambani inoramba ichitungamira mune imwechete indasitiri. Iyo kambani inopinza huwandu hukuru hweakakwira-chaiyo machining uye ekuyedza michina, kuverengera chigadzirwa mhando uye sevhisi kuzadzisa iyo OE mhando zvinodiwa. Nekudaro inozvigadzirira yega inoenderera musika yemakwikwi mukana, uye chigadzirwa chakapihwa pasirese chakakunda kurumbidzwa kwevatengi zvakanyanya.